Ny hetsi-panoherana mahery setra any Ekoatora dia navadika ho antoko an-dalambe fotsiny
Home » etn » Ny hetsi-panoherana mahery setra any Ekoatora dia navadika ho antoko an-dalambe fotsiny
Nahazo mpizaha tany any Ekoatera hafatra vonjy maika from ny masoivohon'izy ireo tamin'ny herinandro lasa. Ny alahady alina lasa dia nivadika antoko ny hetsi-panoherana mahery vaika tany Ekoatora taorian'ny fifanarahan'ny governemanta Ekoatoreana tamin'ireo mpikatroka teratany. Talohan'izay ny Ekoatera Nipetraka ny filoham-pirenena sy ny tompon-tany vazimba nandritra ny fifampiraharahana tamin'ny fahitalavitra nandritra ny fihetsiketsehana.
Ny valiny dia nifarana ny 11 andro ny fihetsiketsehana mahery setra. Nohamafisin'ny mpitarika fa hisintona ny didim-panjakana filoham-pirenena izy izay manala ny fanampiana ara-tsolika ary soloina vaovao. Ny filoha Lenín Moreno dia niarahaba ny fifanarahana ho “vahaolana ho an'ny fandriam-pahalemana sy ho an'ny firenena”.
Ny afomanga satria mpiasan'ny mpitsabo dia mifangaro ao anaty dihy boribory sy antoko an-dalambe miaraka amin'ireo “mpanao fihetsiketsehana” izay araka ny fantatsika izao, dia ny olona miasa any Ekoatera.
Talohan'izay dia tsy mandeha an-tanana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana any Ekoatera, ka nahatonga ny masoivoho vahiny hamoaka vaovao farany mba hiantohana ny fiarovana ny olom-pireneny amin'ny ora iray.
Niangavy ny hisian'ny fandriam-pahalemana any Ekoatera i Papa Francis taorian'ny andro nanafihana ny tranon'ny governemanta sy ny biraon'ny haino aman-jery izay nahatonga ny tsy fahazoana mivezivezy.
Francis dia namoaka ny antso tamin'ny alahady ihany tamin'ny anaran'ny eveka rehetra tany Amazon, anisan'izany ny avy any Ekoatera. Any Roma izy ireo hiady hevitra momba ny ezaky ny fiangonana hanompo tsara kokoa ny zanatany ao amin'ilay faritra.
Hoy i Francis: “Miombona alahelo amin'ireo maty, maratra ary tsy hita aho. Manentana ny ezaka ho an'ny fandriam-pahalemana ara-tsosialy aho, amin'ny fijerena manokana ny olona marefo indrindra, ny mahantra ary ny zon'olombelona. ”